Kymera Aqua Slimbook, yekutanga pc yemitambo neGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Kubva svondo rapfuura vakomana kuSlimbook vanga vachitaura nezve chigadzirwa nyowani chinonzi Kymera icho chaizounzwa Mugovera, Gunyana 15. Iyi komputa nyowani haisi itsva vhezheni yelaptop asi komputa yedesktop. Chikwata chitsva cheSlimbook chinonzi Kymera Aqua uye ane munin'ina anonzi Kymera Ventus.
Chinhu chinotyisa zvikuru pamusoro pezvikwata zviviri izvi ndechekuti ndizvo desktop makomputa anoitirwa mutambo asi neGnu / Linux panzvimbo yeWindows. Nekudaro, Slimbook Kymera Aqua ine simba rese remakomputa-akatonhodza makomputa emitambo uye ese anomhanya pasi pekuparadzirwa kweGnu / Linux.
Kazhinji, patinotaura nezveLinux hatiwanzo kuibatanidza nemitengo yakakwira, asi mune ino kesi, Slimbook Kymera Aqua ine mutengo wakakwira nekuda kwemhando yepamusoro yezvinhu zvayo zvemidziyo. Iyo midziyo ine processor Intel I7-8700K ine 6 cores uye 12 tambo.
Iko mukana wekuve 16, 32 kana 64 Gb yeDDR4-mhando yegondohwe ndangariro. Zvese nezveMSI Z370m GAMING PRO AC mamaboard. Iyi mamaboard inotsigirawo itsva ssd dhiraivha yakaoma inotsigira kuverenga nekunyora kumhanya kunosvika 3000MB / s. Graphic basa raitwa iyo Nvidia GTX 1080Ti GPU ine 11GB kubva mundangariro.
Simba iri rinofambidzana nekunyorova kwemvura kwakanyarara uko kunodzivirira iyo midziyo kubva pakupisa, pamwe nemukana wekuwedzera mwenje weLED kuisa mamiriro emidziyo uye bhokisi rakasarudzika neGnu / Linux uye Slimbook penguin.
Slimbook Kymera Aqua ane munin'ina anonzi Slimbook Kymera Ventus, timu inoshandisa kutonhodza kwechinyakare kwemakomputa ine simba rine mwero, asi kana tichida kuwedzera simba rechikwata, mutengo wekomputa unowedzerawo.
Mutengo wekutanga weKymera Aqua ndeye 1995 euros, mutengo wakakwira wemidziyo yehofisi, asi hapana chinhu chinodhura kana tichida kuchishandisa kumitambo, kugadzirisa vhidhiyo kana kuita kwakanyanya kuita senge 3D modelling. Ehezve, komputa iyi haiuyi nekhibhodi, mbeva kana tarisa. Saka kana tisina zvinhu izvi, tinofanirwa kuzvitenga zvakasiyana.
Iyi Slimbook komputa haisi yekutanga iyo iwe yaunogadzira yedesktop nharaunda. Pari zvino Slimbook ine timu inonzi Curve uye imwe inonzi One v2. Aya maqembu ari ese-mune-one uye mini pc yavanogadzira pamwechete neiyo nyowani Kymera Aqua, kuitira kuti vese vashandisi ve desktop vave nechikwata neGnu / Linux.
Sezvatinotaura, komputa iyi ndeyevashandisi vekumusoro-soro kana ma gamers vanoda Hardware ine simba. Slimbook Kymera Aqua haisi iyo desktop desktop iyo munhu wese anofanirwa kuve nayo asi Hongu, ndiyo komputa yekomputa yakazara kwazvo yatinogona kuwana neiyo Gnu / Linux sisitimu inoshanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Slimbook Kymera Aqua, yekutanga pc yemitambo neGnu / Linux